विश्वका विभिन्न कम्पनीहरुले कर्मचारी कटौती गर्दै, नेपाली फकनु पर्दा के हेला हालत ? – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
विश्वका विभिन्न कम्पनीहरुले कर्मचारी कटौती गर्दै, नेपाली फकनु पर्दा के हेला हालत ?
२७ चैत, काठमाडौं । कोरोनाभाइरसका विश्व नै महामारीकाट चपेटामा परेपछि विश्वमा नै अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएपछि विश्वका विभिन्न कम्पनीले ब्यापक कर्मचारी कटौती गरेको छन् । विश्वले कामदार कटौती गर्दै गए रोजगारका लागि विदेशीएका नेपालीको रोजगार गुम्ने खतरा पनि बढेर गएको छ । यदि रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किनु परे के होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
सरकारले कृषिबाट आर्थिक क्रान्ति गर्ने भनिरहेको बेला विदेशीएका नेपाली कामदार स्वदेश फर्किए उनीहरुलाई कृषिमा लगाउने अवसर सृजना हुने अर्थ्विद् प्रा.डा चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेको धेरैजसो कामदार कृषिमा रहेकोले उनीहरुलाई आवश्यक प्रविधि र औजार दिएर परिचालन गरे कृषि क्रान्ति हुने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘उत्पादन, भण्डारण, संरक्षण र बजारीकरणको चक्रमा उनीहरुलाई प्रवेश गराउन सक्नुपर्छ यसका लागि तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । सबै उत्पादन स्वदेशमा भयो भने आयात कम हुन थाल्छ जसले वैदेशिक मुद्राको आवश्यकता कम पर्छ र भुक्तानी सन्तुलनमा खासै असर गर्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किए भने रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा यसले धक्का दिनेछ । । रेमिट्यान्स कम हुँदा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा चाप पर्छ । अर्थ्विद् अधिकारी अहिले १९ प्रतिशत परिवार वैदेशिक रोजगारीबाट आएको आम्दानीमा मात्रै निर्भर रहेको बताउँछन् ।
एलिजा उप्रेती : रातोपाटीबाट सभार